MUSHAARADA SANTUUQA AH: SAWIR IYO SHARAXAAD, MEESHA AY KU KOREYSO, GOORTA LA URURINAYO, SIDA LOO KARIYO - MUSHROOMS
Kabaha taleefanka: waa la cuni karaa ama maahan
Qalabka gadaashiisa - Mushta laga soo qaato Spider Web. Xitaa dadka wax soo saarka leh ee khibraduhu waxay mararka qaar iska indho-tiraan wakiilkan Boqortooyada Mustaarka, iyo si aan micno lahayn. Maaddaama dhadhankiisa aad u fiican, miisaanka ayaa loo tixgeliyaa xasillooni. Waxa kale oo aad isaga kula kulmi kartaa oo kaliya kaymaha, laakiin sidoo kale in dhulalka buuraha.
Daboolka waa la duubay, waa Rozites caperata. Magaca ayaa si fudud loo sharraxay: koofiyadii yaraa ee loo yaqaan 'koofiyadu' waxay u egtahay daboolka, iyo asliga ah waxa uu leeyahay giraan cad. Dadka dhexdiisa waxaa sidoo kale loo yaqaan 'hen,' oo ah mas'uulka cad, xajmiga roogga, Turks.
Hase-yeeshe, waxaa la isticmaali karaa musqulo cadaan ah, qadhaadh, lowska cagaaran, boqoshaada caanaha, caanaha caanaha madow, duboviki, safo jaale ah, jajabyo, siriinjiyo, moralees, koofiyadaha aafada, iyo qalabka sulfur-jaalaha ah waa inaan loo isticmaalin.
Mushahaani waxay ka kooban tahay kooxda 4aad ee raashinka, taas macnaheedu waa in la cuni karo labadaba cusbo iyo la kariyey labadaba.
Waa muhiim! Mushrooms waa nadaafad aad u fiican oo soo jiidata walxo badan, oo ay ku jiraan kuwa waxyeellada leh. Sidaa daraadeed, ma ahan lagama maarmaan in la soo uruuriyo goobaha dabiiciga ah ee aan fiicnayn. Waxay ka kooban tahay sumayn, xitaa noocyada la cuni karo ee boqoshaada.
Daboolka daboolka baaliga ah wuxuu ku kala duwan yahay 5 ilaa 15 cm dhexroor. Muggeed yar, laftoodu waxay u egtahay ukun qaab muuqaal ah, laakiin marka uu korayo, waxay u fidisaa qaab dhismeed leh xoqan dhinacyada wareegsan. Waa midab-huruud, cows-jaalle ama midab leh. Waxay leedahay dillaac dillaac ah, marar badanna waxay dillaacdaa.
Ma taqaanaa? Waxaa jira noocyo badan oo boqolleyaal ah oo dhulkeena ah in saynisyahannadu weli aysan ku siin karin tiro sax ah. Waxaa la aaminsan yahay in nooc ka mid ah warshadda, waxaa jira ilaa 6 nooc oo ah fangaska.
Taargooyadu ma aha mid aad u badan, waxay leeyihiin midab huruud ah ama midab khafiif ah oo ku jira daacad yar oo isbeddel ku samaysana boodh caleenta ah sida ay u bislayso.
Jirka waa furfurnaan, cadaan, huruuf ku soo baxa hawada. Waxay leedahay baraf fiican oo basbaas ah.
Cagtu waxay u egtahay cad, oo mararka qaar huruud u ah giraangirta. Dhererka dhererkiisu wuxuu u dhexeeyaa 2 ilaa 12 cm, qaybta sare ee lugta ayaa ku dhawaaqday miisaanno jaale ah. Bacaha xayawaanka - laga bilaabo brown duufaan ilaa midab leh. Khilaafaadka - 12 illaa 8 μm midab leh ocher.
Uruurinta kaynta for boqoshaada, fiiro leh boqoshaada sunta ah in ay tahay in laga fogaado - basbaas, galley, qashin qubka, shaydaanka.
Xilliyada iyo degaannada
Daboolka loo yaqaan 'ring-shape' waxaa laga soo ururiyaa badhtamaha bisha Luulyo ilaa dhammaadka Sebtembar on carrada qoyan, qoyan. Inta badan waxaa laga heli karaa dhulka Ukraine, Russia iyo Belarus. Laakiin sidoo kale waxay ku koraan meelo waqooyi ah, ilaa Greenland. Kordhinta kaymaha iyo kaymaha isku dhafan.
Mushrooms waxay ku koraan kooxo waaweyn, waxaad inta badan kula kulmi kartaa qoyaanka blackberry, hoostada, bjørk ama geedo qallalan.
Sidee ujirta feerka ah: video
Maxaa la wareeri karaa
Inkastoo xaqiiqda ah in furaha gogolkiisu yahay mid la cuni karo, waxa fiican in la bilaabo soo-ururinta ayadoo la soo qaadanayo soo iibsashada musqusha. Waxyaabahani waa in aragtida udgoonuhu uu u ekaado aalado qoyan oo cirro leh, sidaas darteed shaki yar oo ka mid ah waa inaad ka tagtaa maqaarka shaki. Sidoo kale, qaar ka mid ah noocyada amanitas waxaa lagu tilmaamay inay yihiin labalaab ee furka dabka.
Waxa kale oo lagu wareersan karaa xubnaha kale ee Spiderweb genus, oo ay ku jiraan kuwa aan la dabooli Karin (Spiderweb Tilmaamaha Cortinarius).
Waa muhiim! Noocyada boqoshaada sunta ah had iyo jeer waa caddaan iyadoo aan loo eegin da'da.
In cuntada ayaa ugu fiican in la cuno boqoshaada dhallinyaro leh weli xirmid kabaha. Guud ahaan, waxa fiican inaad isticmaasho kabaha kaliya ee lagu kariyo, sababtoo ah lugaha way adkaadeen, gaar ahaan haddii uu jirku hore u jirey.
Dhadhanka waa wax aan ka xuneyn champignon. Waxay leedahay ur wacan oo dhadhan, oo hilib ah. Ugu wanaagsan ee dhan, tayada dhadhanka ayaa lagu muujiyey suxuunta ka soo boqoshaada dhallinyarada.
Maxaa ku habboon
Mushaqada ayaa loo isticmaalaa qaab isku mid ah sida liko kale oo badan: la shiilay, la kariyay, la kariyey, la qalajiyey, oo la daboolay. Waxaa loo diyaariyaa sida saxar gooni ah, iyo sida katimid.
Ma taqaanaa? Dalka Poland, waxaa la daaweyn jiray dib-u-soo-kabasho daboolan.
Habka ugu fudud ee lagu kariyo macaantani waa inay marin. Waa kuwan liiska maaddooyinka aad u baahan tahay tan:
koofiyaddan la jaray - 1 kg;
cusbo - 50 g;
Baay caleen - 2-3 caleemo;
9% khudradda miiska - 100 ml;
Basbaas, malayga, dill, miraha garbaha - dhadhamin.
Si loo mariyo daboolka dabka, waa inaad fulisaa talaabooyinka soo socda:
Karkari boqoshaada litir biyo ah (qiyaastii 20 daqiiqo), laab laab colander ah oo si biyo ah u biyo raaci.
In digsi kale, kariyo marinade ka soo maaddooyinka loo diyaariyey: caleemaha laurel, cusbo, basbaas, malayga, dill, miraha iniin khardal la geliyo biyaha diyaarisay. Karkari 5 daqiiqo ka dib karkaraya, ka dibna ku dar khal.
In marinade diyaarisay ku daadi boqoshaada iyo kariyo 5 daqiiqo.
Isku faafidda dhalooyinka diyaarka ah, ku xir kabaha daboolka kuna soo jeeso.
Baro sida loo kariyo boletus, dhadhanka malab, boqoshaada caanaha, ryadovki, chanterelles.
Bangiyada leh boqoshaada pickled lagu kaydiyaa meel qalalan oo qalalan.
Daboolka muuqaalka ah - lakab oo leh dhadhan aad u fiican iyo koboc aad u ballaadhan, markaa waxaa la iibiyaa oo lagu diyaariyaa waddamo kala duwan. Thanks to dhadhanka, waxay ka heshay codsiyo ballaaran ee suxuunta kala duwan: maraqa, saladh, iyo sida saxan madaxbannaan.
Miyaan ku soo aruuriyaa faranku?
Dhabarka. Digaagga qaar ma jecla oo xitaa iska indha tiri. Aniguna waxaan jeclahay mushkilad sababteed. Fareecada iyo dhadhanka, xitaa dhihi lahaa macaan.
Waxaa jira sida likaha - daboolka dabka. In mass ayaa ku kora kaymaha geed leh oo uu leeyahay muuqaal aad u roon. Taasi waa, waan ogahay in ay tahay mid la cuni karo, xittaa way soo uruurin kartaa, laakiin waxaan ula dhaqmay si qallafsan ... illaa dhowaan.
Xilligii xagaaga, oo uu ku dhiiri geliyo Mushrooms Venezuela oo ka yimid goobta Irina, waxaan isku dayay inaan diyaariyo koofiyado xilliga jiilaalka iyaga oo wax yar ka beddelaya tiknoolajiyadda (Waxaan horay u soo qoray faallooyinka si ay iskood ugu qoraan goobta)
1 kg ee boqoshaada-karkariyey la aan la cusbo (Waxaan si taxadar leh u daatay dareeraha, sababtoo ah haddii kale waxay dhadhamiyaan waxoogaa qadhaadh)
100 g oo saliidda cuntada ah
100 g oo biyo ah
2 cha. malqacadaha cusbo
4-5 shaaha. malqacadaha sonkorta
oo dhir udgoon (Waxaan soo qaatey basbaaska madow iyo karootada, caleenta, toonta iyo dallad leh dill leh abuurka bisil)
Sisin - marka la eego 9%, waxaan helay 88 g. Si aan dhadhamo, waa suurtogal iyo waxoogaa yar.
In digsi dhuuban-diirran, diirimay subagga, dhirbaaxo, dhirta, karkariyey. Biyo, cusbo, sonkor, karkariyey 10 daqiiqo, ku dar suufka iyo dhir udgoon, la karkariyey 5 daqiiqo oo kale daboolka. Ku soo saar jaraas-litir hal jeermis ah (qaddarku wuxuu ku filan yahay dhab ahaan), la duubay.
Waxaan bangiga ku ridayaa saaxiibada DR. Mushrooms ayaa deg deg deg ah, inkastoo jalayaashu aysan la yaabin boqoshaada - dhammaantood waxay ururiyaan oo ay kariyaan.
Sidaa daraadeed sanadka soo socda waxaan qaadanayaa boorso weyn, soo qaado kabaha - iyo marina, marina, marina!